ECN zina turapo ezuva lyomahoroworo gana kutengwirapo
OPE kavatemesere noramba moOshandumbala
2021-02-18 Victoria Kaapanda
Varandesi mononzira kunbavakumu unene uvera ou wokana nokakondo
OKAPA - Konyira kwedi nakunye kutunda tupu apa gwamwauka mukisi ogu ko kana nokakondo vagugwane momukunda gwaOshikoto, wokurandesa nyama mononzira kapi vana kara noyiwizamo,morwa kapi vana kuvapilisira varandese hena.
Swakop tavakawapukurura evhu lyokusika ko 1 300 lyokutunga
2021-01-28 Eveline de Klerk
WALVISBAY - Vakansela wondango zaSwakopmund kuna kara vana gava mavango konokampani dokusika ko 8 vawapukurure evango lyokutunga vantu eli lina siki ko 1 300 modoropa.
Ewapukururo nosure moOshana nalirangapeka epaturuko nosure
2021-01-28 Nuusita Ashipala
ONGWEDIVA - Mukurona gerongo momukunda gwaOshana Hileni Amukana katente asi sure zaMweshipandeka ntani Eheke nosekondere ado ngadi katameka kukara varongwa mononkondwa rongero momazuva 1 Murongankuru mvhura zeezi.
WalvisBay kuna kara noudiguwomavango konosure
WALVIBAY - Konyara vanona wokusika ko 143 kapi navagwana mavango gokulirongera moWalvisBay morwa kuna kara noudigu womavango gonosure.
2021-01-21 Obrien Simasiku
Mukadi gatunga moOshigambo kavamukwete konyima tupu apa kayizuvhikire asi kuna zuguma munwendi gomukeke moyihwa.